မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မိတ္ထီလာမြို့, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာနိုင်ငံ
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မိတ္ထီလာကန်၏ အနောက်ဖက် မိတ္ထီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်း ကားလမ်းမကြီး ဘေးတွင်တည်ရှိသော ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၁ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံ
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကောလိပ်အဖြစ် (၁၉၇၇)ခုနှစ်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ်တွင် မိတ္ထီလာဒေသကောလိပ်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် မိတ္ထီလာကောလိပ်အဖြစ် ပြန်လည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် မိတ္ထီလာဒီဂရီကောလိပ် အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တို့မှာ ပါမောက္ခချုပ်၊ တွဲဖက်-ပါမောက္ခချုပ်၊ အကြီးတန်းပါမောက္ခနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတို့ အုပ်ချုပ်သည်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့သည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာန (အထက်မြန်မာပြည်) ၏လက်အောက်တွင်ရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇၊၁၈)ရက်တို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် (၂၄)ခုပါဝင်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Gifu တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော GU-GLEE အစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်အကျိုးတူသုသေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ပညာသင်စေလွတ်ခြင်းများအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်(၂၄)ခုတို့မှာ - Andalas တက္ကသိုလ် (အင်ဒိုနီးရှား), Bogor စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (အင်ဒိုနီးရှား), Brawijaya တက္ကသိုလ် (အင်ဒိုနီးရှား), Bung Hatta တက္ကသိုလ် (အင်ဒိုနီးရှား), Chonnam National University (ကိုရီးယား), Gadjah Mada University မှ (အင်ဒိုနီးရှား), Griffith တက္ကသိုလ် (ဩစတြေးလျ), မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် (မြန်မာ မလေးရှား၏), အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (မလေးရှား), အရှေ့တီမော (အရှေ့တီမော), Shikshan Prasarak မန္တလေးရဲ့ဆာ Parashurambhau ကောလိပ် (အိန္ဒိယ), Campinas ၏ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (ဘရာဇီး), Bengkula တက္ကသိုလ် (အင်ဒိုနီးရှား), တက္ကသိုလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဘရူနိုင်း (ဘရူနိုင်း), Malaya ၏တက္ကသိုလ် (မလေးရှား), New South Wales တက္ကသိုလ် (ဩစတြေးလျ), Pannonia ၏တက္ကသိုလ် (ဟန်ဂေရီ), Tunku Abdul Rahman က (မလေးရှား) ၏တက္ကသိုလ်, Utah တက္ကသိုလ် (USA), ရတနာပုံတက္ကသိုလ် (မြန်မာ ), Zhejiang တက္ကသိုလ် (တရုတ်), နှင့် Gifu တက္ကသိုလ် (ဂျပန်) တို့ဖြစ်သည်။
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်တွင် ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံဘွဲ့များဖြစ်သော (B.A), (B.Sc.), B.A.(Hons), B.Sc.(Hons), (M.A). , (M.Sc). (M.Res) ဘွဲ့များကို နှစ်စဉ်ပေးအပ်သည်။
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်ကျောင်း စာကြည့်တိုက်တွင် မြန်မာစာအုပ် (၁၇၃၆၃)အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် (၂၀၁၅၅)အုပ်၊ မြန်မာမဂ္ဂဇင်း(၃၅၀၉)အုပ်၊ အသစ်ရေးသားပြုစုထားသည့် ကျမ်း(၅၀၀)အုပ်တို့ရှိသည်။
↑ Meiktila University: Welcome to Meiktila University (About Us)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်&oldid=409694" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။